टिकटक भिडियाेमा धेरै लाइक्स् र भ्यू पाउने नानी समाइरालाई गरियो पुरस्कृत नगदले ! (भिडियो हेर्नुहोस) – Wow Sansar
मुख्य पृष्ठ /Video/टिकटक भिडियाेमा धेरै लाइक्स् र भ्यू पाउने नानी समाइरालाई गरियो पुरस्कृत नगदले ! (भिडियो हेर्नुहोस)
यार भएको यो पेस्टलाई करिब १० मिनेट छोपेर राख्ने । प्रयोगका लागि फेसप्याक तयार भयो। विस्तारै मसाज गर्दै फेसप्याक अनुहारमा दल्ने। केहीबेर अनुहारमै सुक्न दिने । फेसप्याक सुकेर कक्रक्क परेपछि पानीले भिजाउने र विस्तारै पुछ्ने। यसले अनुहारमा रहेका मृत कोषिकाहरू निस्किन्छन्। जसले गर्दा अनुहार उज्यालो र चम्किलो देखिन्छ ।
अलौकिक सबिता माताको हेर्नैपर्ने भिडियो
खेत जोत्दै गर्दा भेटीए सलमान खान, फिल्मको काम नहुँदा यसरी खेतमा बिताउँदैछन् समय (भिडियो)